SPC Smartee Boost, smartwatch pamutengo unonzwisisika | Gadget Nhau
Mawadhi akangwara akatove nekutenda kwakasununguka, pakati pevamwe, kune zvigadzirwa zvakadai SPC iyo inopa zvigadzirwa zvekupinda maseru evateereri vese. Mune ino kesi isu tiri kutaura nezve smartwatch watches, zvinova izvo zvatinofanirwa kuongorora, uye zvakanyanya kunyanya nezve inotapira imwe sarudzo kana tikataura nezve mutengo uye mashandiro.
Tiri kutaura nezveSpc's Smartee Boost, yazvino smartwatch ine GPS yakasanganiswa uye kuzvitonga kukuru kunopihwa pamutengo wehupfumi. Tsvaga nesu ichi chishandiso chitsva uye kana chakanyatso kukosha kunyangwe nemutengo unonzwisisika, usarasikirwa neichi chakadzama ongororo.
Sezvazvinoitika pazviitiko zvakawanda, isu tafunga kuperekedza ongororo iyi nevhidhiyo ye yedu YouTube chiteshi, neiyi nzira iwe unozogona kucherechedza kwete chete iyo isingabhokisi asiwo iyo yese nzira yekumisikidza, saka tinokukoka iwe kuti ubatsire iyi ongororo iwe unogona kutarisa uye utibatsire kuramba tichikura.
3 Screen uye app
4 Kudzidziswa uye kuzvitonga
5 Mushandisi interface uye ruzivo
Sezvingatarisirwa mukutarisa mune ino mutengo renji, isu tinowana chishandiso chinonyanya kugadzirwa nepurasitiki. Ose ari maviri bhokisi uye ezasi zvinosanganisa mhando yematte matema epurasitiki, kunyangwe isu tichigona zvakare kutenga pink vhezheni.
Kurema: 35 gramu
Zviyero: 250 x 37 x 12 mm
Iyo yakasungwa tambo ndeyeyese, saka tinogona nyore kutsiva, unova mukana unonakidza. Iyo ine zviyero zvakaenzana zve250 x 37 x 12 mm saka haina kunyanya kukura, uye inorema chete magiramu makumi matatu nemashanu. Iyo wachi yakasarudzika, kunyangwe iyo skrini isingagare kumberi kwese.
Tine bhatani rimwe chete iyo inofanidza kuve korona kurudyi uye kumashure, kuwedzera kune sensors, ine nzvimbo yemagineti mapini ekuchaja. Panyaya iyi, wachi iri nyore uye iri nyore kushandisa.
Isu tinotarisa pakubatana, uye ndeyekuti inotenderera yakakosha mapoinzi maviri akakosha. Chekutanga ndechekuti tinacho Makaralı 5.0 LE, Nekudaro, iro danho rekushandisa kwesystem harizokanganisa zvakashata bhatiri rechishandiso pacharo kana iro reiyo smartphone yatinoshandisa. Mukuwedzera, isu tine GPS, Saka isu tichakwanisa kubata mafambiro edu chaizvo kana tichigadzirisa zvikamu zvekudzidzisa, mumayedzo edu zvakapa mibairo yakanaka. Nenzira imwecheteyo GPS inotitsvaga isu kuti tifunge nezve zvimwe zvikamu zveanosanganisira Weather application.
Iyo wachi haina mvura inosvika pamamita makumi mashanu, musimboti haifanire kuunza chero dambudziko kana uchishambira nayo, izvi zvinogona kunge zvichikonzerwa nekuti haina maikorofoni uye masipika, zvisinei zvazvinoita inodedera uye inoita mushe. Zviripachena isu tine chiyero chemoyo, asi kwete neropa reyero kuyerwa, chinhu chinowanzoitika.
Ini handishaye chero rimwe basa chero bedzi isu tichifunga nezve yakaderera mutengo wechigadzirwa ichi, icho chakagadzirirwa iyo yekuwana renji.
Screen uye app
Tine diki kwazvo IPS LCD pani, kunyanya iri 1,3 inches yakazara izvo zvinosiya imwe yakadomwa yepasi furemu. Kunyangwe izvi, inoratidza zvinopfuura zvakakwana kuita kwezuva nezuva. Nekuda kwekupihwa kwaro mumiyedzo yedu isu takakwanisa kuverenga zvirinyore uye zvine zvimwe zvinobatsira.
Chekutanga ndechekuti iro rakamisikidzwa pani iyo zvakare ine anti-kuratidza kuratidzwa kuti ishandiswe nyore muchiedza chezuva. Kana isu tikaperekedza izvi nehupamhi uye hushoma kupenya kwazvinopa, chokwadi ndechekuti mashandisiro ayo kunze ari akasununguka, ane angles akanaka uye isu hatisi kurasikirwa nechero ruzivo.
Iyo Smartee app inowanikwa ye iOS uye nokuda Android Icho chakareruka, panguva yekuchienzanisa isu tinongofanirwa kuita zvinotevera:
Tchaja chishandiso kubhoot
Isu tinotora iko kunyorera
Isu tinopinda mukati uye tinozadza iro remibvunzo
Isu tinoongorora barcode ine serial nhamba yebhokisi
Yedu SPC Smartee Bhokisi ichaonekwa uye tinya batanidza
In the kushandiswa Tinogona kubvunza yakawanda ruzivo rwakanangana nekuita kwedu kwepanyama senge:
Mwero wekutevera moyo
Pasinei nezvose, iko kunyorera kungangoita zvakapusa. Iyo inotipa isu ruzivo rwushoma, kunyange rwuchikwanira izvo izvo mudziyo unoti unopa.
Kudzidziswa uye kuzvitonga
Chigadzirwa chine huwandu hwe kurovedza presets, izvo zviri zvinotevera zvinotevera:
Vhura kushambira kwemvura
Iyo GPS ichagadziriswa otomatiki mu "zvekunze" zviitiko. Tinogona kugadzirisa mapfupi ekudzidzira mune mushandisi interface yewachi pachayo.
Kana iri bhatiri isu tine 210 mAh iyo inopa yakanyanya mazuva gumi nemaviri anoenderera, Asi nezvimwe zvikamu zvinoshanda uye iyo GPS yakamisikidzwa, isu takaderedza kuti ive mazuva gumi, izvo zvisina kushata futi.
Mushandisi interface uye ruzivo
Iyo yekushandisa interface inonzwisisika, hongu, isu tinongova nematanho mana atinogona kuchinja nekugadzira muchina wakareba pane «kutanga». Nenzira imwecheteyo, mukufamba kuruboshwe tine mikana yakananga kuGPS uye nebasa rekutsvaga foni, iyo inoburitsa ruzha.
Yakatumirwa pa: 9 August 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 3 August 2021
Kurudyi tine data rehutano nerekudzidzisa, pamwe nemudhirowa rekushandisa tichakwanisa kuwana maalarm, application Weather uye nezvimwe zvichatibatsira mukuita zuva nezuva. Kutaura chokwadi, inopa mashoma mashandiro anodarika izvo zvingarondedzerwa neshangu yemitambo, asi iyo saizi saizi uye mushandisi interface inoita kuti zvive nyore kushandisa zuva nezuva.
Muchidimbu, isu tine chigadzirwa chinenge chakafanana nechishongo chekutevera, asi chinopa skrini ine kupenya kwakanaka uye saizi inokwana. kufambisa mashandisirwo ayo pamutengo uri pasi pemakumi matanhatu emadhora munzvimbo dzakajairika dzekutengesa. Imwe inonakidza nzira uye mutengo unonzwisisika kana tichitaura nezve smartwatch.
Inoshanda uye inopenya kuratidza
Iyo ine GPS uye yakawanda yekudzidzira
Unogona kushambira nayo
Kuzvidzivirira kunodonha neGPS yakaitwa
Oxygen mita inoshaikwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » SPC Smartee Boost, smartwatch pamutengo unonzwisisika
IKEA SYMFONISK mutauri furemu, iri nani kurira uye zvimwe dhizaini [Ongorora]